1. Christmas Onyinye Ideas
1.Christmas Onyinye Ideas
2.1 kaadị ekele
Ma gụọ 2.3 Free Movies
4.2 Animated kaadị
5. Ndị ọzọ
Christmas bụ kwa afọ ezumike na akara na-asọpụrụ ndị mụrụ Jizọs. Na na ọtụtụ mba, Christmas carols na songs egwu dị oké mkpa ọrụ na-eme ememe Christmas. Christmas songs enyere ike obi ụtọ na festive ikuku, karịsịa maka a ọzọ.
On Christmas, ọ bụ nakwa ezi echiche na-eme ka Christmas foto ngosi mmịfe iji foto na e weere n'oge ememme, Christmas songs na mesịa ọchịchọ, n'ikpeazụ, ịkọrọ gị enyi na ezinụlọ. Ka na-achọ gburugburu dị nnọọ ka a Christmas song ma ihe niile mgbalị gị bụ n'efu? Ugbu a, anyị ga-azọpụta gị oge na-depụta ụfọdụ na-ewu ewu Christmas songs n'okpuru. Ị nwere ike ibudata a niile songs na-eme ka slideshows ma ọ bụ nanị egwu na a ọzọ. Ka lelee ndepụta na otú ibudata songs. Ọ bụrụ na ị na-eji songs na-eme ka ihe ngosi mmịfe, ị nwekwara ike ịhụ ezigbo ngwá ọrụ iji nyere na nke atọ so.
Part 1: The oké ndepụta nke Christmas songs maka a ọzọ na ngosi mmịfe Ndinam
Nkebi nke 2: Olee otú ibudata ndị a Christmas songs
Nkebi nke 3: Olee otú ime ka slideshows na Christmas songs mfe
Anyị kwadebere a oké ndepụta nke Christmas songs na i nwere ike ime ka ọtụtụ n'ime. Ndepụta a bụ anya họrọ, gụnyere kpochapụwo Christmas songs na nwekwara ụfọdụ nkume ma ọ bụ na-akpa ọchị n'anya. N'ihi ya, ọ bụ n'aka na ị ga-ahụ ihe ị chọrọ.
Mbụ ahụ ndepụta dị n'okpuru:
1. Rudolph Uhie Nosed reindeer 8. Ị na-anụ Gịnị m na-anụ - Carrie Underwood
2. hey hey 9. Christmas Wrapping - The waitresses
3. Santa Claus na-abịa Town 10. A nwa nkita 12 Days nke Christmas
4. kentuoyi na Snowman 11. Ị na ha maara Ọ bụ Christmas - Band Aid
5. Silent Night 12. Adịkwa Xmas - John Lennon
6. oche na Ụlọ Nzukọ 13. Adịkwa Christmas Baby - Bruce Springsteen
7.Reba McEntire - Aga m na-Home N'ihi Christmas 14. Blue Christmas- naa Presley
Ugbu a, ị pụrụ ịnụ ụtọ na-ege ntị n'elu songs. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji ha ka ha slideshows, ị ga-mkpa n'ezie MP3 faịlụ. Otú ị ga-chepụta ụzọ ibudata ndị a Christmas songs. Esi mee ka ọ na-eme? Echegbula. Ebe a bụ oké ngwọta aka you.The Wondershare AllMyTube (AllMyTube for Mac) na-enyere gị ibudata a niile YouTube videos na tọghata ha na faịlụ MP3. Na-ahọrọ nri version awụnyere na kọmputa gị. Mgbe ahụ, ka ego otú ibudata ndị a songs n'okpuru.
Nzọụkwụ 1: Gaa YouTube na-egwu ndị a Christmas songs
Pịa aha nke YouTube video playlist n'elu, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịga na webpage nke playlist on YouTube, si ebe ị pụrụ aslo-ege ntị songs.
Nzọụkwụ 2: Download ndị a songs na otu click
Mgbe song na-akpọ, ị nwere ike òké n'elu n'elu nri akuku nke video ihuenyo ịchọta a Download bọtịnụ. Pịa bọtịnụ ka e video ebudatara. Ụzọ ọzọ bụ idetuo url nke video na pịa Paste URL bọtịnụ na isi window nke usoro ihe omume. Tinye niile video ka download kwụ n'ahịrị na mgbe oge ụfọdụ, i nwere ike na-niile vidio ebudatara.
Nzọụkwụ 3: tọghata YouTube na vidio egwú MP3
Gaa Na n'ọbá akwụkwọ ịchọta video na pịa tọghata bọtịnụ na nri. Họrọ MP3 na mmepụta Format window na pịa Ok na-amalite converting usoro.
Cheta na: Iji chọta ndị songs na mpaghara gị nchekwa, ị nwere ike ịga na converted n'ọbá akwụkwọ ịchọta songs na nri pịa ha. Họrọ Open converted nchekwa na menu na nchekwa ga-akpali na-egosi niile songs. Mgbe ahụ ị pụrụ nyefee songs gị obere ngwaọrụ ma ọ bụ jiri songs na-eme ka slideshows.
Nkebi nke 3: Olee otú ime ka slideshows na ndị a na Christmas songs mfe
N'ikpeazụ, anyị na-abịa, a na akụkụ. Dị ka i nwetara na Christmas songs na i nwere ike emeela a otutu photos n'oge ememme, gị na mkpa otu usoro ihe omume na-kpaa ha ọnụ. The Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe kwesịrị ezi nhọrọ inyere ya aka. Mbubata niile songs na photos a usoro ma na-eme mgbanwe ụfọdụ, mgbe ahụ, ị ga-enweta a mara mma ngosi mmịfe ịkọrọ gị enyi ma ọ bụ ndị òtù ezinụlọ. Nke a nwekwara ike ịbụ onyinye na-ị pụrụ inye ndị enyi gị. Azụ ọzọ. Ka oké slideshows ẹnyene enyi gị na gị onwe gị. Ego otú iji Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe na-eme ka gị onwe gị na fim maka Christmas ebe a
> Resource> Atụmatụ> Olee otú Download / Iji Christmas Songs maka ngosi mmịfe